Prof. Maxamed Sh. Cismaan ‘Jawaari’ oo loo doortay afhayeenka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. – Radio Daljir
Agoosto 29, 2012 6:33 b 0
Muqdisho, Aug – Tartankii doorashada ee afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wanaagsan ku soo dhammaaday, iyadoo jagadaasina loo doortay Prof. Maxamed Sh. Cismaan ‘Jawaar’ oo ahaa ninkii sida weyn loogu saadaalinayey hanashada xilkaasi.
Mudane Jawaari,? ayaa wareeggii 1-aad ee doorashada afhayeenka helay codad dhan 119 cod oo qayb ka ah 236 mudane oo madasha ku sugnaa, halka murashaxii ugu dhawaa oo ahaa Prof. Cali Khaliif Gallayr-na uu helay codad dhan 77 cod.
Murashaxiinta oo qaarkood heleen codad ka yar 10 xubood, ayaa badankoodu muujiyey damac tanaasul oo ay uga harayaan tartanka afhayeenka baarlamaanka, kaddib markii ay wax badan ka hoos mareen filashadoodii helidda codadka mudanayaasha.
Saddex murashax oo kala ahaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi, C/rashiid Xidig? iyo Xasan Abshir Faarax ayaa hal mar ku dhawaaqay in ay ka hareen tartanka murashaxnimo ee guddoonka wakiillada, iyagoo qaarkoodna ay ku dhawaaqeen codadkooda in ay ku biirnayeen Prof. Jawaari.
Prof. Cali Khaliif Gallayr oo ahaa murashaxii 2-aad ee helay codadka ugu badan ee wareeggii 1-aad, helayna tiro dhan 77 cod, lana filayey in ay wareegga 2-aad ee doorashada isla galaan Prof. Maxamed SH. Cismaan ‘Jawaari, ayaa isna ka daba-tanaasulay murashaxiintii hore daqiiqadihii ugu dambeeyey, iyadoo meesha ay ka baxday tartan labaad oo la galo, taasoo suuragal ka dhigtay xilkaasi in uu ku soo baxo mudane Jawaari.
Murashaxiinta ayaa si siman ugu hambalyeeyey guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay is gacan qaadeen Prof. Cabdiweli M Cali ‘Gaas’ oo ah R/wasaaraha dawladda xilligeedu dhammaaday ee federaalka.
Prof. Maxamed Cismaan ‘Jawaari’ ayaa ah aqoonyahan loo tiriyo in uu khibrad durugsan u leeyahay dhinaca shuruucda, waxaana uu dowr muuqda ku lahaa qorista dastuurkii dhawaan la meelmariyey iyo axdi-qarameedyadii dalka loo sameeyey.
Dowladda Puntland oo Soo dhaweynaysa Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Cusub